admin – Page 496 – ျမန္မာသတင္းစံု
ရွှေကြိုရွေးချယ်ပွဲမှာ ဒိုင်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ထက်ထက်မိုးဦး
ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင်တွေထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး တစ်ချိန်က ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းတစ်ခြမ်းမှာ အခိုင်အမာနေရာယူထားနိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းထူးချွန်တဲ့ သူမကတော့ အကယ်ဒမီဆုတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အထိ အောင်မြင်နေသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံစံလေးတွေ အသည်းယားစရာကောင်းတဲ့ အပြုံးလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ အားပေးချစ်ခင်ခဲ့ရတဲ့ သူမကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ ကင်းကွာနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် ယခုမှာနောက်ပိုင်းမှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ပြန်လည်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ သူမကတော့ ယခုမှာ ရွှေကြိုရွေးချယ်ပွဲမှာ ဒိုင်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမကတော့ ” ရွှေကြိုလေးတွေ ဒုတိယနေ့ရွေးချယ်ပွဲလေး Read more
ဆံပင်စတိုင်အသစ်လေးပြောင်းလဲလိုက်ပြီး အထာကျကျဂေါ်နေတဲ့ပုံရိပ်လေးကို ချပြလိုက်တဲ့ ရွှေမှုန်ရတီ
မင်းသမီးချောလေး ရွှေမှုန်ရတီကတော့ ငယ်ရွယ်နုပျိုပြီး တစ်မူထူးခြားတဲ့အလှတရားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မိန်းမလှလေးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာတင် အနုပညာလောကမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက်အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့ ရွှေမှုန်ရတီက ဇာတ်ကားတွေမှာ ကြိုးစားပမ်းစားသရုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေမှုန်ရတီရဲ့ ပြောင်မြောက်ထူးချွန်တဲ့ အနုပညာအရည်အချင်းတွေကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေက ချစ်ခင်အားပေးနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ရွှေထူးနဲ့အတူ နှစ်ကိုယ်တူဘဝလေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ရွှေမှုန်ရတီက အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်း အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း ရွှေထူးနဲ့ ရွှေမှုန်ရတီတို့ဇနီးမောင်နှံက “ကမ်း” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုနေနေ လှနိုင်လွန်းတဲ့ရွှေမှုန်က အခုလည်း ဆံပင်စတိုင်အသစ်လေးတစ်ခုကို Read more
ကြွေလောက်စရာအမိုက်စားပုံလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်အသည်းတွေခြွေယူလိုက်တဲ့ အိန်ဂျယ်လမုန်
ပရိသတ်ကြီးရေ.. နိုင်ငံခြားမင်းသမီးလေးတစ်ယောက်လို ကျော့ရှင်းတဲ့အလှတရား၊ တကယ့်ကို တရုတ်မလေးတစ်ယောက်လို ဖြူဝင်းတဲ့အသားအရေတွေနဲ့ လှသွေးကြွယ်မှုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးကတော့ မော်လ်ဒယ်မင်းသမီးချောလေး အိန်ဂျယ်လမုန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်လေးတွေကို ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် အမြဲမျှဝေလေ့ရှိပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေတာကိုလည်း ပရိသတ်တွေ တွေ့မြင်ကြမှာပါနော်..။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကိုအချစ်ပိုစေတဲ့ အိန်ဂျယ်လေးကတော့ အခုတစ်ခါမှာလည်း ကြွေလောက်စရာ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းတွေကို ခြွေယူလိုက်ပြန်ပါတယ်နော်..။ အနီရောင် တရုတ်ရိုးရာဝတ်စုံလေးကိုဝတ်ဆင်ပြီး မာန်ပါပါလေးဓားကိုင်ကာ သိုင်းချနေတဲ့ဟန်ပန်လေးတွေနဲ့ သူမရဲ့အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကတော့ တကယ်ကို ကြွေလောက်စရာပါပဲနော်..။ တရုတ်သိုင်းကားတွေထဲက ဓားရေးကျင့်နေတဲ့နတ်မိမယ်လေးလို့ ထင်မှတ်ရလောက်အောင်ကို ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်းဖမ်းစားထားတဲ့ အိန်ဂျယ်လမုန်ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုတော့ Read more
ဖယ္ခုံၿမိဳ႕တြင္ ႂကြက္မ်ားကို နွိမ္နင္းရန္ အစိုးရအဖြဲ႕က ေႁမြမ်ားလာလႊတ္ရာ ေဒသခံမ်ား ေၾကာက္လန႔္ေန
ဖယ္ခုံၿမိဳ႕တြင္ ႂကြက္မ်ားကိုႏွိမ္နင္းရန္ အစိုးရအဖြဲ႕က ေႁမြမ်ား လာလႊတ္ရာ ေဒသခံမ်ား ေၾကာက္လန႔္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္ ကယန္းေဒသရွိေက်း႐ြာ ေတာင္ယာခင္းမ်ားတြင္ ႂကြက္မ်ားေပါမ်ားသျဖင့္ ကယန္းတိုင္းရင္းသား ေရးရာဝန္ႀကီးမွ လႊတ္ခိုင္းသျဖင့္ဟုဆိုကာ ေတာင္ယာခင္းမ်ားအတြင္းသို႔ ေႁမြမ်ား လာေရာက္လြတ္ရာ ေက်း႐ြာသားမ်ားမွ ေၾကာက္လန႔္၍ ကန႔္ကြက္ ေမာင္းထုတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ” ေႁမြက ဘယ္လိုလည္း သူ႔ရဲ႕ဆိုးက်ိဳးဘယ္လိုလည္း ေကာင္းက်ိဳးဘယ္လိုလည္း ဂဃနဏမသိတဲ့ခါက်ေတာ့ ႐ြာသားေတြက စိုးရိမ္စိတ္က ရွိလာတာေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ၿပီးတဆင့္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔လည္း ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ျခင္းမရွိဘူး။ ႐ြာသူ႐ြာသားနဲ႔လည္းလာၿပီး ေဆြးေႏြးတာေရာ တိုင္ပင္တာမရွိတဲ့ခါက်ေတာ့ ဒီတိုင္းလာခ်တဲ့အခါက်ေတာ့ Read more
အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေရွ႕ပုိင္းတြင္ အိတ္ဖုိက္အန္၀မ္း ၾကက္ငွက္ တုပ္ေကြးပိုး ေတြ႕ရိွသျဖင့္ ၾကက္မ်ားကို စတင္ရွင္းလင္း
အိႏၵိယႏုိင္ငံ အေရွ႕ပုိင္းမွာ H5N1 ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးပုိးေတြ႕ရွိတာေၾကာင့္ အာဏာပုိင္ေတြဟာ အဂၤါေန ့မွစကာ ၾကက္ေတြကုိ သုတ္သင္ရွင္းလင္းေနၿပီး ၾကက္ဥေတြကုိ ဖ်က္စီးပစ္ေနေၾကာင္း တနလၤာေန ့က အစုိးရထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အိုဒီးရွားျပည္နယ္ တိေမြးကု ေကာလိပ္ရဲ႕ ၾကက္ေမြးျမဴေရးနဲ႕ သုေတသနၿခံမွ ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ နမူနာေတြကုိ စစ္ေဆးစမ္းသပ္ခဲ့ရာမွာ အိတ္ဖုိက္အန္၀မ္းပုိး ေတြ႕ရွိတယ္လုိ့အေျဖထြက္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုအတြင္း ၾကက္ေတြမွာ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး H5N1 ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ ျဖစ္စဥ္ (၆) Read more
မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕ရွိ အာဇာနည္ဗိမၼာန္ ဖ်က္ဆီးခံရ
မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕၊ ရန္မ်ိဳးေအာင္ရပ္ကြက္၊ အ.ထ.က(၁) ေက်ာင္း ေဘာလုံးကြင္းမွာရွိတဲ့ အာဇာနည္ဗိမာန္က လက္ရန္းနဲ႔ သံႀကိဳးေတြ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္ ညပိုင္းက ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုလို ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရတာဟာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖ်က္ဆီးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ထင္ျမင္ယူဆေနၾကၿပီး တရားခံကို အျမန္ဆုံးဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ သက္ဆိုင္ရာကို တိုက္တြန္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ရန္မ်ိဳးေအာင္ရပ္ကြက္ေန ရပ္မိရပ္ဖ တဦးက ” အရင္ညေတြကလည္း အဲဒီေနရာက ဆူညံေနတာပဲ၊ အရက္ေသာက္သူေတြ၊ ေဆးရႉသူေတြ၊ အတြဲခ်ိန္းသူေတြနဲ႔ ခုလို လက္ရန္းေတြကို ထု႐ိုက္ၿဖိဳဖ်က္ေနတာေတြကို Read more
ရိုက်ကူးရေးပြုလုပ်ရင်း ဒေသခံတွေကိုဒါနကုသိုလ်ပြုပေးခဲ့တဲ့ မင်းသားချောနေတိုး
အနုပညာလောကမှာ ဆယ်စုနှစ်များစွာတိုင်ရပ်တည်အောင်မြင်နေပြီး စွယ်စုံရမင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီများရှ င်မင်းသားချောနေတိုးကိုတော့ လူတိုင်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ သူဟာ ဗီဒီရိုဇာတ်ကားများ ရုပ်ရှင်ကားများဖြင့် အနုပညာလောကထဲစတင်၀င်ရောက်လာပြီး ယခုဆိုရင် ဒိတ်ဒိတ်ကြဲမင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီနော်။ နေတိုးဟာ အနုပညာလုပ်ငန်းများကို အဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်နေပြီး ပရိတ်သတ်တွေအတွက် အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီက နေတိုးဟာသူ့ရဲ့facebookစာမျက်နှာတွင် ရိုက်ကူး​ရေးမပြုလုပ်မှီ အချိန်တစ်ခုမှရိုက်ကူး​ရေးပြုလုပ်ပြီးအ​ချိန်တစ်ခုအတွင်း​ဒေသခံများအား ဒါနကုသိုလ် ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ ရိုုက်ကူးရေးပြီးဆုံးခြင်းအမှတ်တရများဆိုတဲ့ captionလေးနဲ့ ပုံလေးတွေတင်ပေးလာပါတယ်။ သူဟာ ဒေသခံများကိုအ၀တ်အစားများ စောင်များကိုကုသိုလ်ဖြစ်လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်စေတနာကောင်းလှတဲ့ ဝါရင့်မင်းသားကြီးတစ်ယောက်လို့ဆိုရရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူးနော်။ နေတိုးနဲ့၀တ်မှုန်ရွှေရည်တို့ပါ၀င်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့မြက်နုဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးဟာလည်းယခုအချိန်တွင်ရုံတင်ပြသနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးရောဒီဇာတ်ကားကြီးကို သွားရောက်အားပေးကြမယ်မလား။ အလှူဒါနပြုလုပ်နေတဲ့ နေတိုးရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပရိတ်သတ်တွေအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
မန်းမန်းစားခါနီး ဟက်ဟက်ပက်ပက်ရယ်မောနေတဲ့ အောင်သူနဲ့ပိုးအိအိခန့်တို့ရဲ့သားလေး သွင်ဦးဟန်
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို အခိုင်အမာသိမ်းပိုက်ထားကြတဲ့ အနုပညာရှင်ရင်သွေးလေးတွေထဲမှာ နိုင်ငံကျော်ဘောလုံးကစားသမားအောင်သူနဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေး ပိုးအိအိခန့်တို့ရဲ့ သားသားလေး သွင်ဦးဟန်ကလည်း အပါအဝင်ပါပဲ..။ သဲကိုးလေးလို့ အားလုံးက ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ သားသားလေး သွင်ဦးဟန်ကတော့ ပါးပြည့်ပြည့်ဖောင်းဖောင်း ၀၀ကစ်ကစ်လေးနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းတဲ့အပြင် မျက်နှာလေးကလည်း အမြဲပြုံးရွှင်ပြီး ချိုသာနေတာကြောင့် ဖေဖေ မေမေ ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတို့ရဲ့ အချစ်တွေအပြင် ပရိသတ်တွေကပါ သည်းသည်းလှုပ် ချစ်ခင်နေကြသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ ပရိသတ်တွေရဲ့မျက်စိရှေ့မှာတင် တဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရောက်လာတဲ့ သဲကိုးလေးကတော့ အခုဆိုရင် အသက်(၆)လကျော် အရွယ်တောင် ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကိုအမြဲအချစ်စေသလို အခုတစ်ခါမှာလည်း မန်းမန်းစားခါနီး အသည်းယားစရာကောင်းအောင် Read more
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပါ…ဖူးရခဲပါတယ်… 🙏🙏🙏 လိုရာဆုကို တောင်းပြီး ပို့စ်ကို ရှဲလိုက်ပါ….
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပါ…ဖူးရခဲပါတယ်… 🙏🙏🙏လိုရာဆုကို တောင်းပြီး ပို့စ်ကို ရှဲလိုက်ပါ….၇ရက်အတွင်း အကျိုးပေးလိမ့်မည်….မယုံသူများကျော်သွားပါမစော်ကားပါနဲ့ရှင့်…. မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးပါ…ဖူးရခဲပါတယ္​… 🙏🙏🙏လုိရာဆုကုိ ​ေတာင္​းၿပီး ပုိ႔စ္​ကုိ ႐ွဲလုိက္​ပါ….၇ ရက္​အတြင္​းအက်ိဳး​ေပးလိမ္​့မည္​….မယုံသူမ်ား​ေက်ာ္​သြားပါ မ​ေစာ္​ကားပါနဲ႔႐ွင္​့…. မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပါ…ဖူးရခဲပါတယ်… 🙏🙏🙏လိုရာဆုကို တောင်းပြီး ပို့စ်ကို ရှဲလိုက်ပါ….၇ရက်အတွင်း အကျိုးပေးလိမ့်မည်….မယုံသူများကျော်သွားပါမစော်ကားပါနဲ့ရှင့်…. မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးပါ…ဖူးရခဲပါတယ္​… 🙏🙏🙏လုိရာဆုကုိ ​ေတာင္​းၿပီး ပုိ႔စ္​ကုိ ႐ွဲလုိက္​ပါ….၇ ရက္​အတြင္​းအက်ိဳး​ေပးလိမ္​့မည္​….မယုံသူမ်ား​ေက်ာ္​သြားပါ မ​ေစာ္​ကားပါနဲ႔႐ွင္​့….
ေနစမ္းပါဦး။ HD ပုံေလးတစ္ပုံထြက္လာတာနဲ႔ ဘာေတြျဖစ္ေနၾကတာတုန္း။ (၃)ႏွစ္ေလာက္ တြဲထားတာနဲ႔ ဟိုေနေဒြးဆိုတဲ့ေကာင္က ဘာေတြေၾကာက္လန႔္ၿပီး ေျဖ ရွင္းခ်က္ေတြ ထုတ္ေနတာလဲ ရွင္းျပၾကပါဦးဟ …။ သံစဥ္ေမာင္ဆိုတာဘာလဲ… ဘယ္ေလာက္ထိ ဆရာက်လဲဆိုတာ မသိပဲ စြတ္သနားေနတဲ့သူေတြကို ၾကည့္ၿပီး သူ႔အေၾကာင္း နဲနဲေရးခ်င္လာလို႔ ခိခိ… မဆီမဆိုင္ ေၾကာက္ေခ်းပန္းၿပီး media ေတြကို စြတ္ေတာင္းပန္ေနတဲ့ ဟိုနဖားႀကိဳးထိုးခံထားရတဲ့ ေမာင္ႏြားေလးေနေဒြးပါ လာဖတ္ခ်ည္ …။ သံစဥ္ေမာင္ဆိုတာ လြန္ခဲ့တဲ့ (၉) ႏွစ္ေလာက္ထဲက ရန္ကုန္ ကန္ေတာ္ႀကီးေစာင္းက Power Light စင္တင္ကေန Read more